Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ugwu Carpathian | Netwọk Mgbasa Ozi
N’isiokwu ndị ọzọ anyị na-ekwu maka ya Ugwu Appalachian, las Ugwu Rocky na ndị himalayas. Ebe anyị ga-elekwasị anya ugwu Carpathian. Ọ bụ ugwu kachasị ukwuu na Europe. O nwere mpaghara nke square kilomita 162.000 ma juputa na ahịhịa na anụmanụ mara mma. N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke ugwu a dị ebube.
You chọrọ ịmụtakwu banyere Ugwu Carpathian? Nọgide na-agụ ihe.
2 Ihe ndi di iche iche na ihu igwe
3 Omume ndi mmadu n'ugwu Carpathian
4 njem na-adigide
Ugwu a malitere site n'otu ugwu dị n'Austria ma gbatịa maka Slovakia, ugwu Hungary, ndịda ọdịda anyanwụ Ukraine, ndịda ọwụwa anyanwụ Czech Republic na Western Serbia. Dika ekewara ya n’etiti otutu obodo, o ghaghi iketa oke oru nke ihe okike ya, ma osisi ohia ya na osisi ya na ojiji ya di iche.
Ndị Carpathians nwere agwa agwakọta. A na-ewere ya dị ka ndọtị nke Alps. Ha kwenyere n'osimiri a mara mma na ugwu ndị a ma gosipụta ya site n'ụdị usoro nke usoro ọmụmụ na usoro. O nwekwara myirịta yiri ya n’ihi ihu igwe dị. Weatherdị ihu igwe ọ bụ ọrụ maka ịdị adị nke ụfọdụ ahịhịa na ahịhịa na mmepe nke ala nwere njirimara pụrụ iche.
N'ebe dị oke egwu, a na-ejikọ Ugwu Carpathian na ugwu ndị a na-akpọ Balkans. N’ugwu ndị ahụ, anyị pụrụ ịhụ otu obodo nwere ọtụtụ osisi pine n’ala ndị ka elu na ọtụtụ ọnụ ọnụ ugwu na ọnụ ọnụ ugwu. Nke a pụtara na afọ nke ugwu ndị a bụ oge na-adịbeghị anya, ma ọ bụghị na ọnụ ọnụ ugwu ahụ ga-eyi kpamkpam.
Na Carpathians enwere ụfọdụ ndagwurugwu glacial na-anọchi anya akụ mmiri na usoro dị ka moraines na efere ndị ọzọ miri emi. Glacial mbuze bụ maka mgbanwe nke teren nakwa dị ka na-aga n'ihu ihe nke ndị na-ahụ maka ọdịdị ala.
Ọkara nke ebe ndị Carpathians dị n’ebe dị elu nke na-erughị otu puku mita, ya mere enweghi ike iwere ya dika ugwu di elu. N'ezie, ọnụ ọgụgụ kasị elu dị elu nke dị elu karịa mita 2.700. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara oke osisi na ahịhịa na-adị elu.
Ihe ndi di iche iche na ihu igwe
Dika ala dum di, otutu ahihia na umu anumanu kpuchiri ya. Ihe odide ala ya bu limestone na mpaghara mgbawa nke di ike, kwusi ma kwusi.
Ihe ndi di ndu di iche iche nwere ike belata oke mmiri ozuzo a na enweta site na otutu oge na mgbanwe onodu nke okpomoku. N'ime akụkọ ihe mere eme, Enweela glaciations dị iche iche mepụtara ahịhịa pụrụ iche. E nwere ọtụtụ ọrụ akụ na ụba ndị jikọtara ịdị adị nke ahịhịa pụrụ iche na anụmanụ. Maka nke a, emeela ọtụtụ ọmụmụ banyere gburugburu ebe obibi na usoro ihe ndị a n'ihi ọrụ akụ na ụba.
A na - ahụkarị ọtụtụ ụdị ihe dị iche iche na akụkụ ndị dị ala, ebe ọ bụ ebe a ka iru mmiri na njupụta nke ahịhịa kachasị ukwuu. Ka anyị na-arịgo n’ogologo, ọ̀tụ̀tụ̀ ikuku oxygen dị adị pere mpe, otú ahụkwa ka nrụgide nke ikuku dị. Nke a pụtara na osisi enweghị ike ịgbasa ma ọ bụ mepụta oke ọhịa.
N'ihe banyere ihu igwe, akụkụ ọdịda anyanwụ nwere mmetụta dị ntakịrị site na Atlantic, na oke mmiri ozuzo dị elu kwa afọ, akụkụ ọwụwa anyanwụ nwere mmetụta kọntinent ọzọ. Akụkụ ọwụwa anyanwụ nwere ntakịrị mmiri ozuzo na iru mmiri dịka ọ bụ n'ime ụlọ. Ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ dịkwa oke oke na mgbanwe mberede nke okpomọkụ na-aka akara n'etiti oge nke afọ.
Otu n’ime ndiiche ndi a hụrụ n’elu ugwu a gbasara mmiri ozuzo bụ na Ugwu Tatra nwere oke mmiri ozuzo kachasị elu kwa afọ (n'etiti 1700 mm) na akụkụ nke Romania opekata mpe (yana ụkpụrụ nke 1200 mm). Maka nke a, ọ ga-ekwe omume ịhụ ka ọdịda mmiri na-ebelata yana grajentị gafere site na northwest na ndịda ọwụwa anyanwụ. Akụkụ mmiri na-anata oke mmiri ozuzo bụ Ugwu Bucegi.
Omume ndi mmadu n'ugwu Carpathian
Ọnọdụ ihu igwe a na-ahụ n'elu bụ ihe na-eme ka ahịhịa dị iche iche ma e jiri ya tụnyere usoro ugwu ndị ọzọ. Na carpathians enweghị eriri igwe na-adịgide adịgide ma ọ bụ nnukwu mmiri n'ihi oke dị elu nke ọnụ ọnụ ugwu ya na ugwu kachasị elu. N'adịghị ka Alps ebe enwere glaciers ndị a.
Omume ndi mmadu enwewo otutu mmetuta ihu igwe dika ihe anwuru ahihia nke mere ka okpomoku di na mpaghara ndia. Ọnọdụ alpine niile na-ekewa ugbu a, yabụ na nsogbu ọ karịrị. Mmetụta ọ bụla metụtara gburugburu ebe obibi na-emebi emebi karịa ma ọ bụrụ na ha abụghị nkewa.
Mmadu ya na ihe omume aku na uba ya na eme ka udiri mgbanwe onodu ubochi n’obere nke o na amu amu ma na edekwa. Ọ bụ ezie enweghi otutu ihe omuma banyere mgbanwe na nkesa osisi na umu anumanu di elu di iche, a na-achọpụtala ha.
Anyị na-achọta karịa mkpakọrịta osisi 82 ​​na ihe karịrị 17 sub-mkpakọrịta ndị mebiri site na omume mmadụ.
Ọchịchọ na-arịwanye elu maka ọrụ mmadụ na gburugburu ndị a na-eme ka mkpa ọ dị itinye mmegharị njem na-adigide. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ebelata mmetụta ndị e guzobere na Carpathians. A na-ahụta njem nleta na-adịgide adịgide dị ka ụzọ isi mepụta ọrụ njem nleta dị iche iche na-akwanyere gburugburu ebe obibi na nchekwa nke ogologo oge nke akụ, ọdịbendị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Nke a bụ ụzọ iji nweta uru nke ihe ndị a niile n'ụzọ ziri ezi na nke ziri ezi. Anyị enweghịkwa ike ị nweta ugwu ndị nwere ụdị akụkụ a ma nwee ọgaranya pụrụ iche ma ghara ịnụ ụtọ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Dị ka akụkụ niile nke ụwa a, anyị ga-amụta iwebata ụkpụrụ nchekwa na ọha mmadụ ka anyị wee nwee ike ịnọgide na-anụ ụtọ gburugburu ebe obibi dị oke ọnụ ahịa dị ka ugwu Carpathian.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere gburugburu ebe obibi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Carpathian